SAMOTALIS: Madaxaweynaha somaliland Mudane Dr Ahmed mohamed mohamud Aadan ( silanyo ) iyo khudbadii sannad laha ahayd ee labada Gole hoos ka akhriso.
Madaxaweynaha somaliland Mudane Dr Ahmed mohamed mohamud Aadan ( silanyo ) iyo khudbadii sannad laha ahayd ee labada Gole hoos ka akhriso.
3) Waxaannu Qadiyadda Somaliland gaadhsiin doonaa Maxkamadaha iyo Hay'adaha Gorsoorka Caalamiga ah.
Jamhuuriyadda Somaliland ma meteli karaan shaqsiyaad danaystayaal ah oo Muqdisho laga cugtay. Waa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbiweynaha Somaliland dooran, ama aanay ceelalyo u diran. Ummadda Somaliland waxaa matala oo kaliya, kana mas'uul ah madax ku timi doorasho xor iyo xalaal ah (Xukuumad iyo Baarlamaan).
• in aan ka tago dhaxal aan duugoobin iyo dhito aan go’in.
• in aan suurto geliyo Doorasho Xor iyo Xalaal ah, taas oo ku qabsoonta xiligii loogu talo galay eebe idamkii.
3. Waxaan sameeyey hay'ad ka shaqaysa Maamul Wanaagga iyo La-dagaalanka Masuq-Maasuqa oo haatan dhamaystiran.
1. Aasaasidda Mac'hadka Tababarka Garsoorayaasha, Ku-xigeenada Xeer-ilaaliyaha Guud iyo Hawl-wadeenada kale, si kor loogu qaado aqoontooda.